चुनावमा कुन दलले कहाँबाट कति उठाए चन्दा ? « Himal Post | Online News Revolution
चुनावमा कुन दलले कहाँबाट कति उठाए चन्दा ?
प्रकाशित मिति : २०७४, २० मंसिर ११:२५
प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार व्यक्तिगत चन्दाकै भरमा निर्वाचन लडिरहेका छन् । ती दलले आफ्ना उम्मेदवारलाई सीमित रकम उपलब्ध गराएका छन् । कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले चुनावलाई लक्ष्य गरेर सञ्चालनमा ल्याएको संस्थागत खातामा पनि न्यून मात्रामा मात्रै सहयोग संकलन भएको छ । तीन ठूला दलले दिएको जानकारीअनुसार कांग्रेसको खातामा एक करोड, एमालेको खातामा दुई करोड र माओवादी केन्द्रको खातामा तीन करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
संस्थागत संकलन भएको सहयोग रकम अति नै न्यून भएपछि पार्टीहरूले उम्मेदवारले आयोगले तोकेको सीमा बराबरको रकम उपलब्ध गराउन सकेका छैनन् । आयोगले प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष उम्मेदवारले २५ लाख र प्रदेशसभा प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेदवारले १५ लाख खर्च गर्न पाउने सीमा तोकेको छ ।
तर, पार्टीले समानुपातिक उम्मेदवारलाई भने रकम दिएको छैन । पार्टीले उम्मेदवारका लागि सहयोग माग्न रसिद काटेर लिने व्यवस्था गरेको एमाले अर्थ प्रमुख विष्णु रिमाल बताउँछन् । रसिद काटेर संकलन भएको रकम उम्मेदवार आफैंले खर्च गर्न पाउँछन् । उम्मेदवारले रकम संकलन गरेको रसिदको प्रमाण भने पार्टीलाई बुझाउने गरेको रिमाल बताउँछन् । ‘उम्मेदवारले संकलन गरेको रकम पारदर्शी हुन सकेको छैन’, उनी भन्छन्, ‘चन्दा संकलन संस्थागत गरी व्यक्तिगत संकलन रोक्नुपर्छ ।’
उम्मेदवारलाई सीधै सहयोग रकम संकलन गर्न दिँदा कतिपय अवस्थाका कमाउने अवसर मिलेको उनी स्विकार्छन् । उम्मेदवार आफैं चन्दाका लागि भिड्ने भएकाले बजारमा चन्दा आतंकको अवस्था छ । ‘पार्टीले मात्र चन्दा संकलन गर्ने थिति बसालेको भए यस्तो अवस्था नआउने व्यवसायी बताउँछन् ।
दलले संस्थागत रूपमा चन्दा संकलन नगरी उम्मेदवारलाई निर्वाचन खर्च व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा दिँदा आर्थिक विकृति बढेको माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय लेखा परीक्षण आयोग प्रमुख उपाध्याय स्विकार्छन् । चन्दा उठाएर आर्जन गर्न सकिने लोभमा पनि हार निश्चित भएका, जनतामाझ अपरिचितले पनि टिकटका लागि हानथाप गर्ने हदको विकृति बढेको उनको बुझाइ छ ।